22 | septembre | 2020 | InfoKmada
Alzheimer : mitombo isa ary miha-tanora kokoa hatrany no voany eto Madagasikara.
InfoKmada - 22 septembre 2020 0
Miha-tanora ary mitombo isa hatrany ny olona voan’ny Alzheimer na ny fikorontanan-tsaina eto Madagasikara. Ny fikorontanan-tsaina izay miteraka fikorontanana eo amin’ny ankohonana sy ny fiarahamonina ary adin-tsaina sy faharerahana ho an’ny fianakaviana mitaiza ny marary.
« Carte grise » : nanomboka androany ny fandraisana antontan-taratasy vaovao
Niverina nanomboka androany ny fandraisana ny antontan-taratasy vaovao momba ny Carte Grise eny anivon’ny Centre Immatriculateur. Ezahana ny hanafaingana ny fomba fiasa araka ny fanazavana. Isany andrasana amin’ny mpanjifa ankilany ny famenoana ny antontan-taratasy takiana araka ny tokony ho izy.
CFM : tsy ao anatin’ny tetim-bolam-panjakana ny «Réparation sy ny indemnisation»
Miankina amin’ny fametrahan’ny fitondrama-panjakana ny didim-panjakana mikasika ny Fond National de Solidarité na FNS, ny ahafahana manonotra ireo niara-boina nandritra ny krizy nanomboka ny taona 2002 raha ny nambaran’ny CFM. Hatreto tsy mbola voafaritra anaty ny tetim-bolam-panjakana ny fanomezana ny « réparation sy ny Indemnisation » momba izany.
Filoha lefitry ny Ceni : tafapetraka ara-pomba ofisialy androany
Tontosa androany teny anivon’ny Fitsarana Tampony Anosy ny fihanianana nataon’ny filoha lefitra vaovaon’ny CENI. Isany fanontaniana voalohany nitondrany ny fomba fijery ny mahakasika ny fifidianana Loholon’i Madagasikara ny faha-11 desambra ho avy izao. Nambarany fa tsy tokony ho sakana ny mbola tsy fahavitanan’ny fifidianana kaominaly, izay voizin’ny maro ankehitriny.
Ambohimalaza : tsy maintsy manao « déchargement » ireo fiara manana lanja mihoatra
Manomboka rahampitso, tsy maintsy manao decharegement avokoa ireo fiara rehetra manana lanja mihoatra ary mety ho tonga hatrany amin’ny fampidirana fourrière ho an’ireo izay tsy manaraka izany. Io no fanapahan-kevitra noraisina taorian’ny zava-nitranga teny amin’ny Station de Pesage Ambohimalaza nanomboka omaly.